Ecar Sainte Anne Anjomakely – Page 4 – "Fianakaviana mino sy mifankatia no antoky ny fampivoarana."
Ndao hanao fandinihan-tena eo am-pamakiana ity fintin’ny tantara tao Betania, tanànan’ny sakaizan’I Jesoa ity. Narary mafy mantsy I Lazara, sakaizan’i Jesoa. Tsy tafandalo tao Betania anefa ity zanak’Andriamanitra ity raha tsy efa nindaosin’ny fahafatesana ilay namany. Nalahelo mafy I Jesoa ary torak’izany ihany koa ireto anabavin’I Lazara dia tsy iza fa I Marta sy I Maria. “Raha taty ianao Tompo ny maty ny anadahiko”, hoy ny tarainan’izy mirahavavy. (suite…)
Continuer la lecture Toriteny Alahady 02-04-2017